Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zase-USA ezaphulayo » Ngo-2021 iiDolophu zase-US zePaki yeeNja
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • iindaba • Xanduva • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
Awuyi kufumana indawo eziluhlaza eziluhlaza kuyo yonke indawo eMelika, kwaye ukuba uyayenza, ayizukuphakama.
I-San Francisco inamandla amakhulu kwezinye iindawo zase-Melika zokupaka izinja njengeNombolo ye-1 yeDja yePaki yePaki.
IBoise, iPortland, kunye neHenderson ziqhayisa ngamanani amathathu eepaki zeenja e-US xa zilungelelaniswe kubungakanani babemi.
Izixeko ezikhulu zeLone Star State zigqiba kwinqanaba kunye nemisila phakathi kwemilenze yazo.
Iipaki zezinja ziindawo ezintle zentsana- kunye nabanini bazo - ukudibana. Ngelixa umntwana wabo onoboya ehambahamba simahla kwaye esenza i-pals, umama notata banokunxulumana nabanye abathanda inja.
Kodwa awuyi kufumana iindawo eziluhlaza ezilungele ulutsha kuyo yonke indawo America, kwaye ukuba uyayenza, ayizukunyuka yonke. Ke zeziphi iiDolophu eziPhezulu zePaki yeeNja ezingama-2021?
Iingcali zibeka i-97 US izixeko ngokusekwe kufikelelo, umgangatho, kunye nemozulu ukufumana.
Jonga ukuba zeziphi izixeko ezili-10 ezikhokelayo (kunye nezili-10 ezisala ngasemva) ipakethi engezantsi, elandelwa zizinto ezithile eziphambili kunye nezibane eziphantsi ezivela kwingxelo.
Iidolophu zePaki yeeNja eziPhambili zowama-2021
1 ESan Francisco, CA
2 I-Oakland, CA
5 IFremont, CA
6 IHenderson, iNV
7 INorfolk, VA
8 Unxweme olude, CA
9 IChula Vista, CA
Ngama-2021 iiDolophu eziPhezulu zePaki yeeNja
90 I-Plano, TX
92 I-Wichita, KS
93 ENewark, NJ
94 I-Cleveland, OH
95 IGarland, TX
97 I-Laredo, TX
ISan Francisco: INkokeli yePakethe: IsiXeko seGolide sisebenzisa amandla aso kuzo zonke iindawo zaseMelika zokupaka izinja njengeNombolo ye-1 eNgcono yePaki yePaki yeZinja.
Izinja ngokucacileyo ngabahlobo / abona bafazi babalaseleyo apha: Iinjana (ekucingelwa ukuba) zingaphezulu kwabantwana - abantwana babantu, oko kukuthi - eSan Francisco. Ke kuyindalo ukuba isixeko siza kuchitha indawo eluhlaza kwindawo enabemi abaninzi. Ngapha koko, isiXeko saseGolide sigqithe kwezinye iidolophu ezingama-92 ngenani leepaki zezinja kubantu abangama-100,000 (abanemilenze emibini).
Isibini esisebenza ngokuqaqamba kuFikelelo (No. 5) kunye nemozulu yaso epholileyo (No. 8), kunye neSan Francisco ngokulula bafumana umda wamaphuzu e-Oakland ukuze babambe indawo yokuqala ngokubanzi. Esi sixeko sithatha uthando lweenjana ukuya kwinqanaba elitsha.
Intshona kuMboniso: ISan Francisco ayisiyiyo kuphela idolophu yasentshona eyeba ukukhanya kwinqanaba lethu. Ezinye izixeko ezine zaseCalifornia, kunye nePortland, i-Oregon, kwiNombolo 3, eBoise, eIdaho, kwiNombolo 4, naseHenderson, eNevada, kwiNombolo 6 zibanga ezinye iindawo ezikwi-10 eziphezulu.
Iphumelele njani iNtshona ugqatso? Ezona zixeko zikhulu zaseCalifornia zikhwela phezulu kwimozulu yazo yohlobo lweMeditera- zilungele ukonwaba, unyaka wonke kutyelelo kwipaki yenja. IBoise, iPortland, kunye neHenderson, kwelinye icala, ziqhayisa ngamanani amathathu eepaki zezinja elizweni xa zilungelelaniswe kubungakanani babemi. Hlala neqabane lakho le-canine kwesinye sezi zixeko, kwaye uya kuphakamisa intshontsho elinye.
Izixeko zaseTexas kwi-Doghouse: Izixeko ezikhulu zeLone Star State zigqiba kwinqanaba kunye nemisila phakathi kwemilenze yazo. Nge-Nombolo 41, i-El Paso iphambili phakathi kweedolophu zaseTexas.
Ngelishwa, izixeko ezihlanu zaseTexas zihlala kumzantsi we-10, kubandakanya iFort Worth, Arlington, kunye nePlano kwiindawo ezingama-88 ukuya kwezingama-90, ngokwahlukeneyo, naseGarland ngowama-95. ULaredo ufile okokugqibela.
Yintoni ebangela ukungaboni kakuhle kwabo? Ukunqongophala kokufikelela kwiipaki zezinja ikakhulu kubekek 'ityala. KwiLaredo, ikwangumgangatho ophakathi weepaki ezingalunganga - abahlwempuzekileyo, enyanisweni, phakathi kweedolophu esilinganise ngazo. Mbi, Texas!